Dzhon Brodes Uotson - आंकडा, दृढ मनोवैज्ञानिक अभ्यास को इतिहास मा स्थापित। छैन त लामो अघि XX सताब्दी को शुरुवात मा, वैज्ञानिक संसारमा behaviorism सिद्धान्त बारे सिके। त्यसपछि त्यो तुरुन्तै सान्दर्भिक सर्कलमा विवाद धेरै कारण, तर अझै पनि बढ्न जारी राखे। वर्तमान समयमा यो आफ्नो अनुयायीहरूलाई भेट्न असम्भाव्य छ, तर behaviorism को प्रभाव जीवनको लगभग सबै क्षेत्रमा फैलियो छ, र यसको प्रविधि सार्वभौमिक लागू जारी।
Dzhon Uotson (1878-1958) यात्री आराम को सानो सहरमा, दक्षिण कैरोलिना मा जन्म भएको थियो। घरमा के भयो को कारण निरन्तर विकार र भ्रष्टाचार रोकिंदैन आफ्ना पिता, Paykens वटसन एक dissolute जीवन नेतृत्व। यो 13 वर्ष उनको छोरा को जन्म पछि परिवार छोडेको आफ्नो पिताजी तथ्यलाई गर्न पुगे। फलस्वरूप, केटा गहिरो भावनात्मक आघात बाँकी। आफ्नो आमा एम्मा सख्त छोराछोरी हुर्काउन अभ्यासहरू, साथै थप निर्देशन लागि विकल्प को स्वतन्त्रता को लगभग पूरा अभाव गर्न नेतृत्व गरेको छ, जो प्रकृति, एक धेरै धार्मिक थियो। र 22 वर्ष मा Dzhon Uotson आफ्नो आमा गुमाए भने, यो एकदम सम्भव छ कि दुनिया त्यो पुजारी गरेको क्यारियर को एक छोरा खोजीमा यस्ता एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक को सुनेका थियो कहिल्यै छ।
1900 मा स्नातक गरेपछि विश्वविद्यालय Fermanagh को मा बप्तिस्मा दिने स्कूल, उहाँले आफ्नो गृहनगर छोडेर अर्को शिक्षाको लागि शिकागो गए। Dzhon Uotson दर्शन स्थानीय शाखामा आएको, तर कारण शिक्षाको प्रकृति, त्यो वैज्ञानिक adviser त्याग्नुहुन्न र मनोविज्ञान गर्न आँखा ड्र। मात्र3वर्ष पछि, उहाँले चूहहरुमा धेरै प्रयोग सञ्चालन जसको लागि पशु प्रशिक्षण विषयको, आफ्नो डक्टरेट थियोसिस बचाव। उहाँले संस्थाले को इतिहास मा कान्छो विद्यार्थी, एक डिग्री प्राप्त बन्न प्रबन्धन भन्ने तथ्यलाई बाहेक, यो यस्तो यी मुसा मा ठूलो मात्रा कार्य अनुभव समर्पित गर्ने पहिलो पनि हो। यो बिन्दु यूहन्ना द्वारा थप कामको लागि क्षेत्रहरु पहिचान र भविष्य अनुसन्धान delimit छ।
विज्ञान Dzhon Brodes Uotson को एक डाक्टर बन्ने मिति देखि दुई वर्ष पछि विभाग टाउको निमन्त्रणा गरिएको थियो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को विश्वविद्यालय बाल्टीमोर को मा। उहाँले जसबाट आफ्नै अध्ययन र प्रयोग जोडतोडले हुन सम्म थप र थप अवसर खोल्ने, सजिलै सहमत भए। आफ्नो जीवनको यो अवधि अवधारणा विकास संग जोडिएको छ जो वैज्ञानिक एक नाम इतिहासको वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास द्वारा। उहाँले हकदार एक लेखक र जो आफ्नो मेनिफेस्टो मा विस्तृत वर्णन behaviorism को सिद्धान्त, को अनुयायी हुन्छ "मनोविज्ञान एक behaviorist को standpoint देखि।" उहाँले जो सही मा यो क्षेत्र को जन्म छलफल गर्न सकिन्छ एक दिन, सार्वजनिक रूपमा यसलाई पढ्न फेब्रुअरी 24, 1913। वटसन मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान को क्षेत्र संग सम्बन्धित सबै भन्दा उद्देश्य विज्ञान छ कि संसारमा घोषणा। उनको अध्ययन गलती एक व्यक्तिको भित्री संसार, आफ्नो विचार र भावना मा निर्भर गर्दछ भन्दै, आफ्नो वर्तमान स्थिति र मूल्य criticizes। जबकि यो experimentally प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि बाह्य व्यवहार, साथै डाटा ध्यान केन्द्रित गर्न उचित हुनेछ।
कारण सिद्धान्त र यसको पछि विकास नवीनता गर्न, Dzhon Uotson वैज्ञानिक समुदायमा महानता को शीर्ष मा छ। आफ्नो तलब अनुसन्धान प्रयोगशाला आकार बढेको छ, दुई पटक वृद्धि गरिएको छ, र व्याख्यान धाउन चाहने विद्यार्थीहरूको देखि, कुनै जारी छ। 1915 मा उनले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ को अध्यक्ष को पोस्ट गर्न नियुक्त गरियो। यी वर्ष behaviorism निर्देशन को heyday सकिन्छ। प्रकाशन वैज्ञानिक famed र त्यसपछि विभिन्न प्रकाशनहरू देखा, र उहाँले2वैज्ञानिक पत्रिका बाहिर सम्पादन गरियो। ": तुलनात्मक मनोविज्ञान एउटा परिचय व्यवहार" मनोविज्ञान वस्तु रूपमा जो चेतना पूर्ण अस्वीकार सन् 1914 मा, आफ्नो बिब्लियोग्राफी replenished छ धेरै महत्त्वपूर्ण काम। आफ्नो सिद्धान्त पनि व्यावहारिक आवेदन प्राप्त, र मानव व्यवहार नियन्त्रणमा वटसन आफूलाई मालिकको कला।
विश्वविद्यालय behaviorism को संस्थापक को मा सिकाउने गर्दा आफ्नो विद्यार्थी मरियम Ickes विवाह गरे। जोडी दुई सन्तान भन्ने तथ्यलाई बावजुद वैवाहिक सफल भनिन्छ गर्न सकिँदैन। 1920 मा, जवान वैज्ञानिक स्नातक विद्यार्थी अर्को आवेग, उहाँले धेरै वर्ष को लागि निर्माण गरिएको छ मात्र होइन विवाह, तर पनि सबै सफल क्यारियर नष्ट गरे। पत्नी रोमान्टिक पत्राचार पति प्रमाण फेला र तिनीहरूलाई प्रकाशित तीव्र घोटाले कारण जो प्रेस, मा। अब देखि, न जो शिक्षण कुनै प्रश्न हुन सक्छ। छोडपत्र धेरै ठूलो थियो, तर यो बाबजुद Rozaliya Reyner र Dzhon Uotson, तल प्रस्तुत छ फोटो जो, तुरुन्तै विवाह गरे। यो विवाहको परिणाम स्वरूप, सफल अघिल्लो थियो, जन्म थिए थप दुई वटसन दुवै केटाहरू। Rosalie 23 वर्ष को पत्नी अघि पनि प्रारम्भिक यस संसारमा बाँकी। जन भारी एक गुमाएको, तर अझै पनि काम जारी राखे। तथापि, पहिले नै अलि फरक दिशा मा।
एक विद्यार्थी रूपमा उहाँले एक प्रयोगशाला, एक पाले र पनि वेटर भ्रमण गर्न समय थियो, तर भविष्यमा उहाँले Dzhon Uotson रूपमा बन्न विश्व प्रसिद्ध छ किनभने, धेरै केही मानिसहरू हेरचाह छ - एक मनोवैज्ञानिक। राजद्रोहको संग चियोचर्चा उहाँलाई कार्यान्वयन लागि नयाँ क्षेत्रमा खोज्न बाध्य, र उहाँले प्राप्त ज्ञान को आवेदन को व्यावहारिक स्कोप छनोट। थप विशिष्ट हुन, त्यो विज्ञापन मा टाउको संग छोड्छ। ती समयमा, यो अपेक्षाकृत नयाँ क्षेत्र उपभोक्ताहरु को नियन्त्रण संयन्त्र को व्यवहार पत्ता लगाउन विस्तृत छानबिन आवश्यक छ। र यो उनको टाउको एउटा विज्ञापन क्यारियर मा जोडतोडले यो नियन्त्रण मनोविज्ञान को उद्योग मा एक केन्द्रिय स्थिति ओगटेको हो, त्यसैले जन। उहाँले कुनै पनि अन्य जस्तै, तल बाट, को न्यूयोर्क को एजेन्सीहरू मध्ये स्टेनली Rizora नियन्त्रणमा सुरु हुन्छ। सँगै अन्य उम्मेदवार संग, त्यो काम सबै चरणमा, पनि आफ्नो विशाल ज्ञान र वैज्ञानिक उपलब्धिहरू बाबजुद बित्दै। समय, त्यो नयाँ कौशल प्राप्त र पूर्ण अभ्यास मा आफ्नो सिद्धान्त को प्रावधान लागू, व्यापारिक मनोविज्ञान जोडतोडले, माथि loosens। त्यसैले, उहाँले कम्पनी को उपाध्यक्ष को श्रेणीका उदाउनु र धेरै वर्ष को लागि यस स्थितिमा रहन प्रबन्धन।
विज्ञापन उद्योग मा काम, Dzhon Uotson पुस्तकमा आफ्नो वैज्ञानिक सिद्धान्त लुगा लगाउनु जारी। उनको मृत्यु पछि, मनोवैज्ञानिक र सिद्धान्तकारहरु भविष्य पुस्ताका "behaviorism", "behaviorism को तरिका" र सहित धेरै काम, रहन "मनोवैज्ञानिक बाल हेरविचार।" थप को सिद्धान्त मा काम गर्ने आफ्नो सबै भन्दा प्रसिद्ध अनुयायीहरूलाई, बीच, हामी Burres Skinner, जो, सँगै अन्य सहकर्मी behaviorism को पदोन्नति प्राप्त गर्न व्यवस्थित छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तथापि, अवधारणा बारम्बार गंभीर आलोचना गर्न, सबै भन्दा भाग को लागि कारण थप एक coercive उपकरण जस्तै भन्ने तथ्यलाई गर्न subjected गरिएको छ। पछि वर्ष मा, आफ्नो अध्ययन धेरै प्रविधी को एक सेट तर केही छोडेर गिरावट गएका र व्यापार, राजनीति र अन्य क्षेत्रहरू प्रयोग यस दिन छ।
जीवन र मृत्युको अन्तिम वर्ष
धेरै वर्ष पत्नी को मृत्यु पछि एक पूर्व शिक्षक विज्ञापन व्यापार देखि फिर्ता गर्न, र एक शान्त खेत मा बसोबास निर्णय गर्छ। त्यहाँ र Dzhon Uotson यसको अन्तिम दिन बाहिर बस्ने। आफ्नो जीवनको जीवनी 1958 मा छोटो कटौती। केही महिनाअघि उनले एक पटक अध्यक्ष थियो जसमा सहमतिलाई, यो मानार्थ सदस्यहरु यसको सूचीमा समावेश। उहाँले आफ्नो प्रिय काम deprived थियो एक पटक किनकी, अपमान भूल मदत थिएन, र उहाँले धेरै वैज्ञानिक कागजात ज्वाला दिने, यार्ड मा आगो प्रबन्ध उहाँले यस संसारमा बायाँ जसमा त्यसै वर्ष मा त सही, केही स्थान कब्जा गर्न। यो कम्तिमा पनि केही गतिविधि वटसन को अन्तिम गुन्जन हुन्छ, तर यो वटसन को मनोविज्ञान योगदान किनभने यो अन्तिम शताब्दीको सबैभन्दा उल्लेखनीय वैज्ञानिकहरूको एक बनाएको यो कार्य, एक प्रतिष्ठा छोयो छैन।
मानव जगतले मा सबै भन्दा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग
जो भिटामिन कद्दू मा पाइन्छ? लाभ र कद्दू को हानि
Selfie छडी-जस्तो काम? के भने काम गर्दैन Selfie-स्टिक?
Thorns पोशाक - 2013 मा प्रवृत्ति